Aragtida - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare > Hadafka Ururka
Baro waxtarka aragga iyo adeegyada la daboolay.
Daboolida aragga waxaa lagu bixiyaa dhammaan qorshayaasha. Waxaan la shaqeynaa Qorshaha Adeegyada Aragga (VSP) si aan u sameyno dheefaha aragga ee dheeraadka ah oo ay heli karaan dhammaan xubnaha.
Faa'iidada Medicare Advantage (MA) Daboolida aragtida qorshaha waxaa ka mid ah:
$ 0 wada bixin ah baaritaanka indhaha ee sanadlaha ah
Muraayadaha indhaha ee la qoro ama xiriirada - illaa $ 400 xadka gargaarka labadii sanaba mar xubnaha MA Dual Plan (HMO SNP), iyo ilaa $ 150 faa'iido ku xadid labadii sanaba mar qorshayaasha kale oo dhan.
Daboolida imtixaanaadka si ogaanshaha iyo daweynta cudurada iyo xaaladaha isha (lacag -bixin/caymis ayaa dhici karta)
Shabakad weyn oo bixiyeyaasha aragga guud ahaan WA
Fiiro gaar ah: Adeegyada indhaha iyo aragga qaarkood waa ma daboolay, sida keratotomy radial, qalliin LASIK, daaweynta aragga, ama kaalmo aragga oo hooseeya.
Faa'iidooyinka Aragga ee Qorshaha Faa'idada Medicare (MA)
Xubnuhu waa inay adeegsadaan bixiyeyaasha shabakadda si ay u helaan adeegyo la daboolay, marka laga reebo xaalado xaddidan sida xaaladaha degdegga ah ama daryeelka deg-degga ah ee degdeg loogu baahan yahay. Marka laga reebo xaaladaha degdegga ah ama daryeelka degdegga ah, waxaa laga yaabaa inay kharash badan ku kacdo helitaanka daryeel ama ka iibsashada qalabka bixiyeyaasha ka baxsan shabakadda.
Baaritaannada Medicare daboolay si loo ogaado loona daweeyo cudurrada iyo xaaladaha isha waxaa lagu bixiyaa shabakaddeena takhasuska leh.
Faa'iidooyinka aragga dheeraadka ah waxaa lagu bixiyaa Shabakadda Xulashada Qorshaha Adeegga Aragga (VSP).
Fadlan eeg Caddaynta Daboolista qorshahaaga (EOC) ama ka wac Adeegga Macmiilka 1-800-942-0247 (TTY: 711) si aad u hesho macluumaad dheeri ah ama caawimaad helida adeeg bixiye shabakad kuugu dhow.
MA Laba Qorshe (HMO SNP) $ 0 ama 20% oo ah kharashka imtixaannada Medicare daboolay si loo ogaado loona daweeyo cudurrada iyo xaaladaha isha
$ 0 doollar hal imtixaan WellVision sanad walba
Illaa $ 400 faa'iido ku xadid labadii sanaba mar qalabkii aragga dheeraadka ahaa (muraayadaha ama xiriirada dhakhtar qoro)
Ka baxsan shabakadda Xulashada VSP: 100% kharashka ka sarreeya xadka faa'iidada qorshaha
Qorshaha MA 1 (HMO) 20% oo ah kharashka imtixaannada Medicare daboolay si loo ogaado loona daweeyo cudurrada iyo xaaladaha isha
Illaa $ 150 faa'iido ku xadid labadii sanaba mar qalabkii aragga dheeraadka ahaa (muraayadaha ama xiriirada dhakhtar qoro)
Qorshaha MA 3 (HMO) $ 40 doollar ee baaritaannada Medicare daboolay si loo ogaado loona daweeyo cudurrada iyo xaaladaha isha
Qorshaha MA Qorshaha RX (HMO)
Faa'iidooyinka Aragga ee 2021 ee Qorshaha iyo Tusaha Aragga
2021 Hagaha Shabakadda Aragga (Ingiriis iyo Isbaanish)
Qorshaha MA 1 (HMO SNP) Imtixaanka indhaha ee joogtada ah oo leh adeeg bixiyaha VSP: $ 0 lacag bixin, xaddid hal imtixaan sanadkiiba. Haddii adeeg bixiye ka baxsan shabakadda la isticmaalo, kaabis dhan $ 47 ayaa lagu dabaqi karaa wadarta kharashka.
Imtixaanka takhasuska indhaha si loo ogaado xaaladaha iyo cudurada isha: $ 40 oo la bixiyo. Haddii adeeg bixiyuhu ku jiro shabakad, markaa gudbin dhakhtar ayaa loo baahan yahay. Haddii adeeg bixiyuhu ka baxsan yahay shabakadda, markaa oggolaansho hore ayaa loo baahan yahay.
Indho-xirashada: Muraayadaha muraayadaha indhaha waxay leeyihiin $ 0 hal mar oo muraayad ah labadii sanaba mar.
Mashiinka ama muraayadaha indhaha ayaa leh $ 150 faa'iidooyin ku saabsan wadarta kharashka, labadii sanoba mar. Qiimaha haray waxaad ka bixinaysaa jeebka.
Xubnuhu waa inay adeegsadaan shabakadda VSP.
Lens-ka Shabakada Ka Baxsan - qaddarka loo oggol yahay kharashka:
Aragtida Keliya: $ 30
Lifocal saf ah ama Horusocod: $ 50
Khadka saddexda geesood ah: $ 75
Kireynta: $ 75
Farshaxanada Shabakadda ka baxsan ama Laydhka Xiriirka - qaddarka loo oggol yahay kharashka:
Jir: $ 45
Muraayadaha indhaha: $ 85
Qorshaha MA 2 (HMO) Imtixaanka indhaha ee joogtada ah oo leh adeeg bixiyaha VSP: $ 0 lacag bixin, xaddid hal imtixaan sanadkiiba. Haddii adeeg bixiye ka baxsan shabakadda la isticmaalo, kaabis dhan $ 47 ayaa lagu dabaqi karaa wadarta kharashka.
Indho-xirashada oo ay kujiraan muraayadaha indhaha, muraayadaha indhaha, iyo muraayadaha indhaha oo leh $ 0 hal biil oo muraayadaha ah iyo wadarta faa iidada $ 150 labadii sanaba.
Qiimaha haray waxaad ka bixinaysaa jeebka. Xubnuhu waa inay adeegsadaan adeeg bixiyaha shabakadda VSP.
MA Labada Qorshe (HMO) Imtixaanka indhaha ee caadiga ah oo leh adeeg bixiyaha VSP: 0% qiimaha, xaddid hal imtixaan sanadkiiba. Haddii adeeg bixiye ka baxsan shabakadda la isticmaalo, kaabis dhan $ 47 ayaa lagu dabaqi karaa wadarta kharashka.
Imtixaanka takhasuska indhaha si loo ogaado xaaladaha iyo cudurada isha: 0% qiimaha. Haddii adeeg bixiyuhu ku jiro shabakad, markaa amar dhakhtar ayaa loo baahan yahay. Haddii adeeg bixiyuhu uu ka baxsan yahay shabakadda, markaa waxaa loo baahan yahay qorshe gudbin la oggolaaday.
Indho-xirashada oo ay kujiraan muraayadaha indhaha, muraayadaha indhaha, iyo muraayadaha indhaha oo leh $ 0 hal biil oo muraayadaha ah iyo wadarta faa iidada $ 400 labadii sanaba.
Khadka saddexda geesood ah: $ 60
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Oktoobar 8, 2021